ဘာသာစကားသည် ဟင်းချက်ခြင်းနှင့် တူညီပုံ (Why Language is Like Cooking by Tom Hayton) - Myanmar Network
ဘာသာစကားသည် ဟင်းချက်ခြင်းနှင့် တူညီပုံ (Why Language is Like Cooking by Tom Hayton)
Posted by Myanmar Network on June 28, 2011 at 15:23 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Lexis စကားလုံး ဆိုတာ “vocabulary” ဝေါဟာရကိုဘဲ နောက်တစ်မျိုး ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းထဲမှာသိထားပြီးတော့ လိုသလိုထုတ်သုံးတဲ့ စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာစကားမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုပြီးတော့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းပါးတဲ့ လူအတော်များများဟာ ဘာသာစကားမှာ သဒ္ဒါက အခက်ဆုံးအပိုင်းပဲလို့ ထင်ကြပါတယ်။
စာရေးသူကတော့ ဒါကို သဘောမတူပါဘူး။ ဝေါဟာရတွေက အများကြီး ပိုပြီး အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ပြောပြပါ့မယ်။
(၁) ဝေါဟာရတွေမပါဘူးဆိုရင် ဘာမှ ပြောနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘောတရားရှုထောင့်က ပြောမယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းတွေသိပေမယ့် ဝါကျတစ်ကြောင်းမှ ဖြစ်အောင် မတည်ဆောက် နိုင်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကားလုံးတစ်လုံး သိပြီဆိုတာနဲ့ ဥပမာ ‘‘water’’, ရေ ဆိုပါတော့ အဲဒါဆို ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။ စကားလုံးအဓိပ္ပါယ်သိဖို့ပဲလိုပါတယ်။ (ဒီအကြောင်းကို နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ပြောပါ့မယ်။)
(၂) ဘာသာစကားရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများက အသင့်သုံး အနေအထားရှိပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲခြောက်တစ်ထုပ်ကိုယူပြီး ရေနွေးဖျောစားလိုက်တာက ဂျုံကိုနယ်၊ ခေါက်ဆွဲဖြစ်အောင်လုပ်၊ ဆော့စ် လုပ်စသည်ဖြင့် ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ ချက်ပြုတ်တာထက် အများကြီး ပိုမြန်ပါတယ်။
အလားတူဘဲ ‘‘Good morning’’, ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ ဆိုတဲ့အပြောမျိုး၊ ‘‘I look forward to hearing from you soon’’, မကြာခင် အကြောင်းပြန်လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်စောင့်စားနေပါသည်ဟု အသုံးမျိုးတွေက အကုန်လုံး အစအဆုံး မှတ်ထားပြီးတော့ အသင့်ယူသုံးလိုက်ရုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အသုံးအနှုန်းတွေကို သဒ္ဒါနည်းအရ ညွှန်ကြားချက်တွေ စည်းမျဉ်းတွေအတိုင်း လိုက်နာပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ရေးသားဖော်ထုတ်လို့လည်း ရပါတယ်။ (I getalot of people asking me why we say ‘‘I look forward to hearing?’’ as opposed to ‘‘I look forward to hear?’’) လို့ ဘာဖြစ်လို့ မသုံးတာလဲလို့ ကျွန်တော့်ကို ခဏခဏ မေးကြပါတယ်။) ဒါပေမယ့် အသင့်သုံးဝေါဟာရ တစ်စုအနေနဲ့ တစ်ခါတည်း မှတ်ထားလိုက်တာက ပိုပြီးတော့လည်း မြန်ပါတယ်၊ တွင်လည်း တွင်ကျယ်ပါတယ်။
(၃) ဝါကျအတော်များများက အရင်တုန်းက ပြောဖူးပြီးသား ဝါကျတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အခုလေးတင် ကြားလိုက်ရတဲ့ အပြန်အလှန် စကားပြောကြပုံကို ကြည့်ပါ။
Good luck, mate. ကံကောင်းပါစေ သူငယ်ချင်း။
Thanks. See you later. ကျေးဇူးတင်တယ်၊ နောက်တော့တွေ့မယ်။
ဒီအပြန်အလှန်ပြောဆိုခန်းမှာ ပြောဆိုတဲ့ အချိန်နဲ့ နေရာက လွဲလို့ ဘာမှ မထူးခြားပါဘူး။ အသင့်သုံး စကားစုတွေနဲ့ဘဲ တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောသူတွေက သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းတွေကို စဉ်းစားပြီး သုံးနေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အသင့်သုံးအနေနဲ့ ယူသုံးလိုက်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး နောက်တစ်ချက်ကိုဆက်ပြောပါ့မယ်။
(၄) သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းတွေကို လက်တွေ့အသုံးချတာ အများစုဟာ မသိစိတ်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ပွားပါတယ်။ သိစိတ်ထဲမှာ မရှိပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရရင် စကားပြောရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာရေးသားရာမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် စကားလုံးတွေကို သဒ္ဒါနည်းအရ စဉ်းစားပြီးတော့ တည်ဆောက်နေရမယ်ဆိုရင် ပြီးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်မတန်နှေးကွေးသွားပါလိမ့်မယ်။ သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းတိကျမှန်ကန်မှုကို အာရုံစူးစိုက်လွန်းရင် သွက်သွက်လက်လက် ပြောဆိုနိုင်မှုကို ထိခိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ စကားအချေအတင်ပြောတယ်ဆိုပါတော့ အဲဒီအခါမှာ စကားကို အသွက်လက်ဆုံးပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မိခင်ဘာသာစကား အနေနဲ့ပြောတဲ့သူတွေတောင်မှဘဲ အရင်ကလည်း မပြောဘူးသေးတဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အချက်တွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားဖို့ တော်တော်ဘဲ ကြိုးစားပြီး ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားတွေလိုမျိုး စကားအချေအတင် ပြောရာမှာ အတွေ့အကြုံပိုရှိတဲ့ သူတွေကတော့ ပိုပြီးတော့ သွက်လက်တယ်၊ ပိုပြီးတော့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ အဲဒါက သဒ္ဒါ ပိုတတ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ စကားအချေအတင် ပြောတဲ့ အတွေ့အကြုံ များပြားသူဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အခက်အခဲ ကြုံတဲ့အခါမှာ သုံးလို့ရတဲ့ စကားစုတွေ စုပြီးဆောင်းပြီး ရှိနေခြင်းသာလျှင်ဖြစ်တယ်။ လူရွှင်တော်တွေဟာ တခါတည်း စင်ပေါ်မှာ ပြက်လုံးတွေကို ဖန်တီးယူတာမဟုတ်ပါဘူး ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ ပြက်လုံးတွေကို အားကိုးအားထားပြုရတာဖြစ်တယ်။ ဘာသာစကားဆိုတာ အများစုက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။
(၅) အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါပိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် ပြောသူတွေ မဟုတ်တဲ့ သူတွေ အတွက် အင်မတန်အချိန်ကြာတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ သဒ္ဒါနည်း တိကျမှန်ကန်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ အရေးကြီးတာ မှန်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့ ရည်မှန်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဝေါ ဟာရတွေကို ဦးစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘာသာစကားကို ဒီလိုမျိုးရှုမြင်တာကို “the Lexical Approach”, ဝေါဟာရ အဓိက ချဉ်းကပ်ပုံလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ Michael Lewis စာအုပ်မှာ စပြီး သုံးနှုန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် သဒ္ဒါစာအုပ်ကို အပင်ပန်းခံပြီးတော့ လေ့လာတာထက် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာအဖြစ် ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးစွဲတဲ့သူတွေ ပြောနေတဲ့စကားတွေကို နားထောင်၊ သူတို့ ရေးတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ပြီးတော့ သဘာဝကျတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို အတွဲလိုက် မှတ်မိဖို့ အဓိကထားပြီး ကြိုးစားတာက ပိုပြီးတော့ အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။
အစီရင်ခံစာ ရေးသားပုံကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုပါစို့။ အကောင်းဆုံး အစီရင်ခံစာ ရေးနည်းရေးဟန် ဥပမာတွေ ရှာရမယ်။ (ဆိုပါစို့ စတော့အိတ်ချိန်းမှာ စာရင်းသွင်းထားတဲ့ စာရင်းပါဝင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွေကို လေ့လာနိုင်တယ်။) ပြီးရင် အဓိကအချက်တွေကို ဖော်ပြပြီး ချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ စကားစုတွေကို မျဉ်းသားထားနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့
‘‘We experienced slow growth?’’
‘‘We expect to bounce back?’’
‘‘These results are encouraging.’’
ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးအနှုန်းတွေရဲ့ သဒ္ဒါနည်းအရ တည်ဆောက်ပုံကို အချိန်အများကြီး အကုန်ခံပြီးတော့ ခွဲခြားစိတ်ဖြာနေလို့လည်း ရတာပါဘဲ။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ အသင့်စားခေါက်ဆွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကို ခွဲခြားလေ့လာသလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေါက်ဆွဲစားရုံပဲ ဆိုရင်တော့ ဒါတွေမလိုပါဘူး။
ဟင်းချက်ရာမှာလိုဘဲ ဘာသာစကားမှာလည်း အချို့သော နည်းလမ်းတွေက ပိုပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ အသင့်စားခေါက်ဆွဲဟာ ရေနွေးထည့်ပြီးတော့ အုပ်ထားလိုက်ဖို့ဘဲ လိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် “Good” နဲ့ “time of the day” လို စကားတွေဟာ နောက်မှာ မနက်၊ နေ့လည်၊ ညနေ ထည့်ပေးလိုက်ဖို့သာ လိုပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ဘာမှတောင် ပြုပြင်စရာ မလိုပါဘူး “How are you” လို စကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအရေးကြီးတာက အဲဒီစကားစုတွေကို သုံးရာမှာ မှန်ကန်တဲ့အသုံးပြုနည်း စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာဖို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ စကားစုတစ်ခုစီရဲ့ အဓိပ္ပာယ်၊ ဘယ်လိုသုံးရသလဲ၊ အသံဘယ်လိုထွက်ရသလဲ၊ အခြားဘာတွေနဲ့ တွဲပြီးသုံးရသလဲ (ဘယ်စကားတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းနိုင်သလဲ)၊ အဓိပ္ပာယ် ဆင်တူတွေ၊ အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ၊ နောက်ပြီးတော့ အလဲအလှယ်အပြောင်းအလဲပြု လုပ်နိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
“We experienced slow growth.”, ကြီးထွားမှုနှေးကွေးခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် ဆိုရင် အရင်က ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ကို ပြောကြားတဲ့အခါမှာ သုံးရတယ်လို့ သိရမယ်။ ဒီအချိန်မှာ တွဲသုံးလို့ရတာတွေကို နည်းနည်းလေ့လာထားလို့ရတယ်။
“We experienced slow growth in the first/second/third/fourth quarter.”
ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္တ သုံးလပတ် အတွင်း ကြီးထွားမှုနှေးကွေးခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
“We experienced slow growth initially.’’
ကနဦးမှာ ကြီးထွားမှု နှေးကွေးခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို နည်းနည်းပြောင်းပြီး အဓိပ္ပာယ် လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သွားအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
“We experienced rapid growth.”
ကြီးထွားမှု လျင်မြန်ခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာဟာ ဝေါဟာရစု အစိတ်အပိုင်းတွေ ပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့ ကြိုတင် စုဆောင်းထားမှဖြစ်မယ်။ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ဖို့ အဓိကသော့ချက်ကတော့ ဟင်းချက်ရာမှာလို စပ်ဟပ် ပေါင်းစပ်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
(Tom Hayton ၏ Why Language is Like Cooking အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/why-language-is-like မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
Lexis စကားလုံး ဆိုတာ “vocabulary” ဝေါဟာရကိုဘဲ နောကျတဈမြိုး ချေါတာဖွဈပါတယျ။ ခေါငျးထဲမှာသိထားပွီးတော့ လိုသလိုထုတျသုံးတဲ့ စကားလုံးတှဖွေဈပါတယျ။
ဘာသာစကားမကြှမျးကငျြဘူးဆိုပွီးတော့ မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုနညျးပါးတဲ့ လူအတျောမြားမြားဟာ ဘာသာစကားမှာ သဒ်ဒါက အခကျဆုံးအပိုငျးပဲလို့ ထငျကွပါတယျ။
စာရေးသူကတော့ ဒါကို သဘောမတူပါဘူး။ ဝေါဟာရတှကေ အမြားကွီး ပိုပွီး အရေးကွီးပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ ပွောပွပါ့မယျ။
(၁) ဝေါဟာရတှမေပါဘူးဆိုရငျ ဘာမှ ပွောနိုငျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ သဘောတရားရှုထောငျ့က ပွောမယျဆိုရငျ အင်ျဂလိပျသဒ်ဒါစညျးမဉျြးတှသေိပမေယျ့ ဝါကတြဈကွောငျးမှ ဖွဈအောငျ မတညျဆောကျ နိုငျတာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စကားလုံးတဈလုံး သိပွီဆိုတာနဲ့ ဥပမာ ‘‘water’’, ရေ ဆိုပါတော့ အဲဒါဆို ဆကျသှယျပွောဆိုနိုငျပါပွီ။ စကားလုံးအဓိပ်ပါယျသိဖို့ပဲလိုပါတယျ။ (ဒီအကွောငျးကို နောကျပိုငျးမှာ ဆကျပွောပါ့မယျ။)
(၂) ဘာသာစကားရဲ့ အစိတျအပိုငျး အတျောမြားမြားက အသငျ့သုံး အနအေထားရှိပါတယျ။ ခေါကျဆှဲခွောကျတဈထုပျကိုယူပွီး ရနှေေးဖြောစားလိုကျတာက ဂြုံကိုနယျ၊ ခေါကျဆှဲဖွဈအောငျလုပျ၊ ဆော့ဈ လုပျစသညျဖွငျ့ ဟငျးခကျြနညျးစာအုပျကို ကွညျ့ပွီးတော့ ခကျြပွုတျတာထကျ အမြားကွီး ပိုမွနျပါတယျ။
အလားတူဘဲ ‘‘Good morning’’, ကောငျးသောနံနကျခငျးပါ ဆိုတဲ့အပွောမြိုး၊ ‘‘I look forward to hearing from you soon’’, မကွာခငျ အကွောငျးပွနျလာလိမျ့မညျဟု မြှျောလငျ့စောငျ့စားနပေါသညျဟု အသုံးမြိုးတှကေ အကုနျလုံး အစအဆုံး မှတျထားပွီးတော့ အသငျ့ယူသုံးလိုကျရုံပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ အသုံးအနှုနျးတှကေို သဒ်ဒါနညျးအရ ညှနျကွားခကျြတှေ စညျးမဉျြးတှအေတိုငျး လိုကျနာပွီးတော့ ကိုယျ့ဘာသာ ရေးသားဖျောထုတျလို့လညျး ရပါတယျ။ (I getalot of people asking me why we say ‘‘I look forward to hearing?’’ as opposed to ‘‘I look forward to hear?’’) လို့ ဘာဖွဈလို့ မသုံးတာလဲလို့ ကြှနျတေျာ့ကို ခဏခဏ မေးကွပါတယျ။) ဒါပမေယျ့ အသငျ့သုံးဝေါဟာရ တဈစုအနနေဲ့ တဈခါတညျး မှတျထားလိုကျတာက ပိုပွီးတော့လညျး မွနျပါတယျ၊ တှငျလညျး တှငျကယျြပါတယျ။
(၃) ဝါကအြတျောမြားမြားက အရငျတုနျးက ပွောဖူးပွီးသား ဝါကတြှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျော အခုလေးတငျ ကွားလိုကျရတဲ့ အပွနျအလှနျ စကားပွောကွပုံကို ကွညျ့ပါ။
Good luck, mate. ကံကောငျးပါစေ သူငယျခငျြး။
Thanks. See you later. ကြေးဇူးတငျတယျ၊ နောကျတော့တှမေ့ယျ။
ဒီအပွနျအလှနျပွောဆိုခနျးမှာ ပွောဆိုတဲ့ အခြိနျနဲ့ နရောက လှဲလို့ ဘာမှ မထူးခွားပါဘူး။ အသငျ့သုံး စကားစုတှနေဲ့ဘဲ တညျဆောကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပွောသူတှကေ သဒ်ဒါစညျးမဉျြးတှကေို စဉျးစားပွီး သုံးနတောမြိုး မဟုတျဘဲ အသငျ့သုံးအနနေဲ့ ယူသုံးလိုကျတာတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခကျြနဲ့ ဆကျနှယျပွီး နောကျတဈခကျြကိုဆကျပွောပါ့မယျ။
(၄) သဒ်ဒါစညျးမဉျြးတှကေို လကျတှအေ့သုံးခတြာ အမြားစုဟာ မသိစိတျထဲမှာပဲ ဖွဈပှားပါတယျ။ သိစိတျထဲမှာ မရှိပါဘူး။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ဆိုရရငျ စကားပွောရာမှာဘဲဖွဈဖွဈ၊ စာရေးသားရာမှာဘဲ ဖွဈဖွဈ စကားလုံးတှကေို သဒ်ဒါနညျးအရ စဉျးစားပွီးတော့ တညျဆောကျနရေမယျဆိုရငျ ပွီးတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ အငျမတနျနှေးကှေးသှားပါလိမျ့မယျ။ သဒ်ဒါစညျးမဉျြးတိကမြှနျကနျမှုကို အာရုံစူးစိုကျလှနျးရငျ သှကျသှကျလကျလကျ ပွောဆိုနိုငျမှုကို ထိခိုကျပါတယျ။ ဥပမာ စကားအခအြေတငျပွောတယျဆိုပါတော့ အဲဒီအခါမှာ စကားကို အသှကျလကျဆုံးပွောနိုငျတယျဆိုတဲ့ အင်ျဂလိပျဘာသာကို မိခငျဘာသာစကား အနနေဲ့ပွောတဲ့သူတှတေောငျမှဘဲ အရငျကလညျး မပွောဘူးသေးတဲ့ နူးညံ့သိမျမှတေဲ့အခကျြတှကေို ရှငျးလငျးပွောကွားဖို့ တျောတျောဘဲ ကွိုးစားပွီး ပွောရတာဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံရေးသမားတှလေိုမြိုး စကားအခအြေတငျ ပွောရာမှာ အတှအေ့ကွုံပိုရှိတဲ့ သူတှကေတော့ ပိုပွီးတော့ သှကျလကျတယျ၊ ပိုပွီးတော့ မိမိကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိတယျလို့ထငျရပါတယျ။ အဲဒါက သဒ်ဒါ ပိုတတျလို့ မဟုတျပါဘူး၊ စကားအခအြေတငျ ပွောတဲ့ အတှအေ့ကွုံ မြားပွားသူဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့ အခကျအခဲ ကွုံတဲ့အခါမှာ သုံးလို့ရတဲ့ စကားစုတှေ စုပွီးဆောငျးပွီး ရှိနခွေငျးသာလြှငျဖွဈတယျ။ လူရှငျတျောတှဟော တခါတညျး စငျပျေါမှာ ပွကျလုံးတှကေို ဖနျတီးယူတာမဟုတျပါဘူး ကွိုတငျစီစဉျထားတဲ့ ပွကျလုံးတှကေို အားကိုးအားထားပွုရတာဖွဈတယျ။ ဘာသာစကားဆိုတာ အမြားစုက ကွိုတငျပွငျဆငျထားရပါတယျ။
(၅) အင်ျဂလိပျသဒ်ဒါပိုငျနိုငျဖို့ဆိုတာဟာ အင်ျဂလိပျဘာသာကို မိခငျဘာသာစကားအဖွဈ ပွောသူတှေ မဟုတျတဲ့ သူတှေ အတှကျ အငျမတနျအခြိနျကွာတဲ့ ကိစ်စဖွဈပါတယျ။ သဒ်ဒါနညျး တိကမြှနျကနျဖို့ဆိုတာ တကယျတော့ အရေးကွီးတာ မှနျပါတယျ။ သို့သျောလညျး ဆကျသှယျပွောဆိုဖို့ ရညျမှနျးတယျဆိုရငျတော့ ဝေါ ဟာရတှကေို ဦးစားပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီဘာသာစကားကို ဒီလိုမြိုးရှုမွငျတာကို “the Lexical Approach”, ဝေါဟာရ အဓိက ခဉျြးကပျပုံလို့ ချေါကွပါတယျ။ Michael Lewis စာအုပျမှာ စပွီး သုံးနှုနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
လကျတှအေ့ားဖွငျ့ပွောရမယျဆိုရငျ သဒ်ဒါစာအုပျကို အပငျပနျးခံပွီးတော့ လလေ့ာတာထကျ အင်ျဂလိပျ ဘာသာစကားကို မိခငျဘာသာအဖွဈ ကြှမျးကငျြစှာ သုံးစှဲတဲ့သူတှေ ပွောနတေဲ့စကားတှကေို နားထောငျ၊ သူတို့ ရေးတဲ့ စာတှကေို ဖတျပွီးတော့ သဘာဝကတြဲ့ စကားအသုံးအနှုနျးတှကေို အတှဲလိုကျ မှတျမိဖို့ အဓိကထားပွီး ကွိုးစားတာက ပိုပွီးတော့ အဓိပ်ပာယျရှိပါတယျ။
အစီရငျခံစာ ရေးသားပုံကို လလေ့ာခငျြတယျဆိုပါစို့။ အကောငျးဆုံး အစီရငျခံစာ ရေးနညျးရေးဟနျ ဥပမာတှေ ရှာရမယျ။ (ဆိုပါစို့ စတော့အိတျခြိနျးမှာ စာရငျးသှငျးထားတဲ့ စာရငျးပါဝငျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှရေဲ့ နှဈပတျလညျအစီရငျခံစာတှကေို လလေ့ာနိုငျတယျ။) ပွီးရငျ အဓိကအခကျြတှကေို ဖျောပွပွီး ခြိတျဆကျဖို့အသုံးပွုတဲ့ စကားစုတှကေို မဉျြးသားထားနိုငျတယျ။ ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတော့
ဒါမြိုးတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီအသုံးအနှုနျးတှရေဲ့ သဒ်ဒါနညျးအရ တညျဆောကျပုံကို အခြိနျအမြားကွီး အကုနျခံပွီးတော့ ခှဲခွားစိတျဖွာနလေို့လညျး ရတာပါဘဲ။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ အသငျ့စားခေါကျဆှဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ဓာတုဗဒေပစ်စညျးတှကေို ခှဲခွားလလေ့ာသလို ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခေါကျဆှဲစားရုံပဲ ဆိုရငျတော့ ဒါတှမေလိုပါဘူး။
ဟငျးခကျြရာမှာလိုဘဲ ဘာသာစကားမှာလညျး အခြို့သော နညျးလမျးတှကေ ပိုပွီးပွညျ့စုံပါတယျ။ အသငျ့စားခေါကျဆှဲဟာ ရနှေေးထညျ့ပွီးတော့ အုပျထားလိုကျဖို့ဘဲ လိုပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ “Good” နဲ့ “time of the day” လို စကားတှဟော နောကျမှာ မနကျ၊ နလေ့ညျ၊ ညနေ ထညျ့ပေးလိုကျဖို့သာ လိုပါတယျ။ တဈခြို့ကတော့ ဘာမှတောငျ ပွုပွငျစရာ မလိုပါဘူး “How are you” လို စကားမြိုးဖွဈပါတယျ။
အဓိကအရေးကွီးတာက အဲဒီစကားစုတှကေို သုံးရာမှာ မှနျကနျတဲ့အသုံးပွုနညျး စညျးမဉျြးတှကေို လိုကျနာဖို့ဘဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ စကားစုတဈခုစီရဲ့ အဓိပ်ပာယျ၊ ဘယျလိုသုံးရသလဲ၊ အသံဘယျလိုထှကျရသလဲ၊ အခွားဘာတှနေဲ့ တှဲပွီးသုံးရသလဲ (ဘယျစကားတှနေဲ့ ပေါငျးစညျးနိုငျသလဲ)၊ အဓိပ်ပာယျ ဆငျတူတှေ၊ အဓိပ်ပာယျဆနျ့ကငျြဘကျတှေ၊ နောကျပွီးတော့ အလဲအလှယျအပွောငျးအလဲပွု လုပျနိုငျတာတှေ ဖွဈပါတယျ။
“We experienced slow growth.”, ကွီးထှားမှုနှေးကှေးခွငျးနှငျ့ ကွုံတှခေဲ့ရသညျ ဆိုရငျ အရငျက ကုမ်ပဏီရဲ့ ဆောငျရှကျခကျြကို ပွောကွားတဲ့အခါမှာ သုံးရတယျလို့ သိရမယျ။ ဒီအခြိနျမှာ တှဲသုံးလို့ရတာတှကေို နညျးနညျးလလေ့ာထားလို့ရတယျ။
ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ်တ သုံးလပတျ အတှငျး ကွီးထှားမှုနှေးကှေးခွငျးနှငျ့ ကွုံတှခေဲ့ရသညျ။
ကနဦးမှာ ကွီးထှားမှု နှေးကှေးခွငျးနှငျ့ ကွုံတှခေဲ့ရသညျ။
အပွနျအလှနျအားဖွငျ့ ပါဝငျတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေို နညျးနညျးပွောငျးပွီး အဓိပ်ပာယျ လုံးဝ ဆနျ့ကငျြဘကျ ဖွဈသှားအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။
ကွီးထှားမှု လငျြမွနျခွငျးနှငျ့ ကွုံတှခေဲ့ရတယျ။
ဘာသာစကားကြှမျးကငျြမှုဆိုတာဟာ ဝေါဟာရစု အစိတျအပိုငျးတှေ ပေါငျးစပျနိုငျဖို့ ကွိုတငျ စုဆောငျးထားမှဖွဈမယျ။ ဘာသာစကားကြှမျးကငျြဖို့ အဓိကသော့ခကျြကတော့ ဟငျးခကျြရာမှာလို စပျဟပျ ပေါငျးစပျတတျဖို့ဖွဈတယျ။
(Tom Hayton ၏ Why Language is Like Cooking အားဆီလြျောသလို ဘာသာပွနျဆိုထားပါသညျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ ရေးသားထားသော မူလဆောငျးပါးနှငျ့ အခွားစိတျဝငျစားဖှယျ ဆောငျးပါးမြားအား ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။)
အထကျပါ ဆောငျးပါးအားကူးယူ၍ အခွား website နှငျ့ blog မြားတှငျ တငျမညျဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/why-language-is-like မှကူးယူကွောငျး ထညျ့သှငျးဖျောပွပေးပါရနျ။
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on June 28, 2011 at 17:44
Permalink Reply by 1f23koa6gu5m8 on December 21, 2011 at 6:33
Permalink Reply by 1f23koa6gu5m8 on December 21, 2011 at 6:35
စာရေးထားတာက တော်တော်ကောင်းတယ် သူငယ်ချင်း ကျေးဇူးအများတင်တယ်နေ်ာ
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on June 29, 2011 at 9:18
Permalink Reply by Hein htike aung on June 29, 2011 at 9:32
however it is right
Grammar is very important in one language but it is not really.
It is right in some time.
Permalink Reply by zeyar htut on June 29, 2011 at 9:37
I would like to know about more common phrase . thank u
Permalink Reply by sandarkyaw on June 29, 2011 at 9:45
Permalink Reply by snake on June 29, 2011 at 10:55
Permalink Reply by Thaw Thaw on June 29, 2011 at 11:09
Permalink Reply by ကောင်းကင် on June 29, 2011 at 11:17
Permalink Reply by ကောင်းကင် on June 29, 2011 at 11:20
အနော် အခုမှစပြီးလေ့လာချင်လို့ပါ ဘယ်လို လေ့လာရမလဲ ပြောပေးပါဦး နော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော်
ဘယ်လိုသင်ပေးလို့ရနိုင်မလဲ ပေါ့ နော် သင်တန်းတွေလဲ တက်ချိန်မရလို့ပါ
Permalink Reply by Ummay Ayman on June 29, 2011 at 12:41
ိုအင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားမှုဆိုင်ရာစာစုများနှင့် သင်ခန်းစာများကို အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာအဖြာဖြာ တွင်တင်ပေးထားပါသည်။ လေ့လာကြည့်ပါ။